र’ङ्गेहात भेटेपछि फ’रार जेठाजु बुहारी प’क्राउ, फौजी शैलीमा मध्यरातमा यसरी समातिए, रुदै सुनाए सुरुदेखिको सम्पुर्ण नालीबेली, सबै चाकित ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 16, 2021 April 16, 2021 AdminLeaveaComment on र’ङ्गेहात भेटेपछि फ’रार जेठाजु बुहारी प’क्राउ, फौजी शैलीमा मध्यरातमा यसरी समातिए, रुदै सुनाए सुरुदेखिको सम्पुर्ण नालीबेली, सबै चाकित ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
झापा । झापामा फेरि अर्को सोच्नै नसकिने अनि घि’नलाग्दो घ’टना घटेको छ । एकै परिवारका दाजुले आफ्नै कान्छ भाइकि श्रीमती भगाएका हुन । केही समय अगाडी धर्म चाहार नाम गरेका एक पिडित युवा मिडियामा आएर आफ्नै माइला दाइले आफ्नी श्रीमती भगाएको भन्दै भक्कानो छोडेर रोएका थिए । डेढ बर्सिय बालिका ब.ला.त्कार गरेको आरोपमा ८ बर्ष जेल बसेर भर्खरै आएका माइला दाजुले आफ्नी श्रीमती लिएर एक्कासि बेपत्ता भएको जनाएका थिए।
उनले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी समेत दिएका थिए । दिनरात उनीहरुको खोजिमा रुदै भौतारिएका भाइलाई आज ठूलो खुशी मिलेको छ । मध्यरातमा झापाको बिर्तामोडमा सुपर अनलाइन टिभी फास्ट अनलाइन टिभी सहित धेरै पत्रकारहरुको टोलि र प्रहरीको टोलिले दिनभरि देखि खोजी गर्दा मध्यरातमा फेला परेका छन ।
घरमै आफुहरुलाई र.ङ्गेहात आमा र भाउजुले भेटेपछी भागेको बताउने उनिहरुले यस्तोसम्म भने कि सुनेर सबैको होस उड्यो । आफ्नै बुहारीलाई भगाउने जेठाजु र भाग्ने बुहारीसङ गरिएको बिशेष भिडियो यहाँबाट भिडियोमा हेर्नुहोस्
आजको राशिफल हे’र्नुहोस् : मिति २०७८ साल बैसाख ०४ गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल १७ तारिख